जागीर पनि राम्रै छ । खेतिपाति पनि चलेकै छ । केटाकेटी कुबाटोमा लागेकि भनुँ भने आफ्नो पेशा गरी खाएकै छन् । एक हिसावले भाईको घरवार सुखले चलिरहेको छ । कोहिसँग केहि लिनु छैन र दिनु पनि छैन । बाचा बन्धनमा बाँधिएर कसैसंग लड्नु भिड्नु पनि परेको छैन । सामाजिक काममा होस्टेमा हैंसे गर्न पनि भ्याएकै छ । साथीभाईको जमघटमा मनखोलेर हाँस्न पनि पाएकै छ । असामाजिक, असहिष्णु र अभद्रताको ईजार चुँडालेर नङ्ग्याउन पाएकै छ । यति धेरै पाउनुहरुको बीच केहि नपाए जसरी खुम्चिनु र तृष्णाको बेगलाई बढाउनुको कुनै तुक छ र?
फलैंचामा थचक्क बसेर अशन्तोषको सुसेरा हाल्यो भाईले एकाविहानै । भन्छ, दाई, यत्रो समयको मेरो त्याग र समर्पणको कसैले मुल्यांकन गरेनन् । मन भरी पिडा बोकेर हिँडेको छु । अव त कनिष्टहरुले पनि उछेने। जीवनमा गल्ति गरिएछ दाई !
हैन, के को गल्ति हो भाई? गल्ति त सवैले गर्छन नि । गल्ति गरेर नपछुताउने पनि मानिस हुन्छन् र ? खोज्दै गयौं भने जीवनमा धेरैले धेरै गल्ति गरेको पाउने छौ । बरु भन, यो फतफत् चाहिँ के को लागि हो?
कुरा गर्न, मानिसलाई फकाउन, तर्साउन र झुक्याउने कलामा सानै देखि पारंगत हो भाई । नेतागिरी गर्न पाउँदा र आफूले भनेको जस्तो हुँदा साह्रै रमाउथ्यो सानै देखि । नेतागिरीले खान दिंदैन भन्ने जान्दा जान्दै पनि यो भाई फुस्रे नेताहरुको भाषणको पछि लाग्दै हिंड्थ्यो । बाउले धेरै सम्झाए पछि भने चक र डस्टर समाउने जागिरे भएको थियो ।
'लागेको बानि केहि गरे नजाने' भनेजस्तो मास्टर भएपछि पनि राजनीतिक दलको झण्डा बोक्न छोडेको रहेनछ । मास्टरी गरेर तलव कमाउने, झण्डा बोकेर परिवर्तन ल्याउने दोहरो मिसनमा हिंडेको भाई कुनै बेला आफू चढ्ने गाडीमा झण्डा हाल्ने सपना देख्दै थियो सायद ।
उडायो सपना सवै हुरीले । परिवर्तन कै नारा दिएर आफैले राजनीति सिकाएका लक्का जवानहरुले दल भित्रकै शक्ति स्थापनाको लागि बर्चश्वको खिचातानिमा भाईलाई पुछारमा पारेछन् । पिडाले रन्थनिएको भाई मेरो घरको फलैंचामा थचारिएको रहेछ ।
के हुनु दाई, त्यहि राजनीति त हो । मैले यति लामो समय गरेको त्याग सवै खेर गयो । त्यति मात्र कहाँ हो र आफैलाई अपमानित महशुस् पनि गरेको छु । उहिले बुवाले भन्नु हुन्थ्यो, 'राजकुमार, कसैलाई बिगार्नु छ भने राजनीतिमा जान प्रेरित गर्नु ।' के गर्नु र त्यतिखेर नीतिको राजा राजनीति भनेर लागियो अहिले त्यसको स्वाद पाईयो ।
दाई, राजनीतिक रथको घोडा कुदेन भने पछि परिने रहेछ । राजनीतिमा आफ्नो स्थान र अभिमान गुमाउंदाको स्वाद अमिलो हुने रहेछ । जित्छु भनेर मैदानमा आउनेहरु सवैले कहाँ जित्छन् र । धेरैले त हारको पिडा नै सहने हो ।
भाई, सहनै नसके पनि सहु । समले त्यसै भनेका हुन् र पिर र पिडा सहन कठीन हुन्छ, तर सहनुको विकल्प पनि छैन ।
- राजाराम बर्तौला
पुर्व उपनियोग प्रमुख नेपाली राजदूतावास दक्षिण कोरिया
प्रकाशित मिति: सोमबार, पुस २६, २०७८, ०९:१४:००